Kugara neInvestment yeBrazil uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Yekupinda Kwekufambisa Services muBrazil ye:
● Kugara nekudyara muBrazil
● Ugari nekudyara kubva kuBrazil
● Visa yegoridhe muBrazil
● Pasipoti yechipiri kubva kuBrazil
● Kugara nekudyara kweBrazil nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muBrazil uye Magweta e Kugara neInvestment muBrazil uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muBrazil zvinoshanda zvakabatana kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment agents kuBrazil kunopa mabasa ekugara nekudyara muBrazil, Residency nezvirongwa zvekudyara muBrazil, Residency nehurongwa hwekudyara muBrazil, yechipiri Residency nekudyara muBrazil, mbiri Residency nekudyara muBrazil, ugari hwekugara nekugara nekudyara muBrazil. , Kugara zvachose nekudyara muBrazil, Kugara kwenguva pfupi nekudyara muBrazil, Kugara nehurongwa hwekudyara muBrazil, Kugara nehurongwa hwekudyara muBrazil, Citizenship nekudyara muBrazil, Citizenship nemapurogiramu ekudyara muBrazil, Citizenship nehurongwa hwekudyara muBrazil, wechipiri Citizenship nekudyara muBrazil, hunyanzvi hwehukama nekudyara muBrazil, pekugara uye ugari nekudyara muBrazil, kugara uye ugari nekudyara muBrazil, hupfumi Citizenship zvirongwa muBrazil, Citizenship neinvestment scheme muBrazil, Citizenship nezvirongwa zvekudyara muBrazil, chechipiri pasipoti muBrazil, yechipiri mapasipoti zvirongwa muBrazil , chirongwa chechipiri chepasipoti muBrazil, pasipoti yepiri yepiri muBrazil, pekugara uye pasipoti yechipiri kuBrazil, pasipoti yedhipatimendi yechipiri muBrazil, pasipoti yepiri nekudyara muBrazil, yechipiri ugari pasipoti muBrazil, yechipiri pasipoti chirongwa muBrazil, chechipiri pasipoti zvirongwa muBrazil. , vhiza yegoridhe muBrazil, vhiza dzendarama muBrazil, zvirongwa zvendarama vhiza muBrazil, chirongwa chendarama vhiza muBrazil, chechipiri vhiza vhiza muBrazil, chechipiri vhiza vhiza chirongwa muBrazil, mbiri yegoridhe visa muBrazil, ugari uye visa yegoridhe muBrazil, kugara uye vhiza yegoridhe muBrazil, mugari vhiza mugari muBrazil, dhiza vhiza scheme muBrazil, goridhe vhiza zvirongwa muBrazil.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muBrazil nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muBrazil yeResidency nekudyara: USD 40,000
Nhanganyaya Brazil ne Residency neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveBrazil
Ine huwandu hwevanhu mazana maviri negumi nemakumi maviri, Brazil ndiyo nyika yechishanu-yakazara vanhu panyika (Chivabvu 210). Ongororo ya2018 yakafumura kuti 2010% yevagari (50.7 miriyoni vanhu) vakazviratidza serudzi rwakasviba kana rwakasanganiswa uye 97% (47.7 mamirioni) semuchena, musanganiswa wedzinza unoratidzira tsika dzakasiyana dzenyika.
Brazil inogumburwa mumatunhu enguva nhatu, imwe yacho iri yaFernando de Noronha chete, chitsuwa che21-chitsuwa chiri muAtlantic Ocean. Rudzi rwakakosha chikamu chekumabvazuva nekumadokero nguva matunhu. Ingori chikamu chakakura chematunhu eEastern time region cherekedza Daylight Saving Times.
Kubva kumasango emvura eAmazon kusvika kumahombekombe ekumabvazuva akanaka, nzvimbo dzeBrazil nevanhu vakazvimirira vakachinja senzvimbo yenyika. Iine musanganiswa wakakura wemazita anosanganisira chiGerman, chiItari, chiJapanese, chiAfrica uye kuungana kwevanhu vemunharaunda, tsika yega yega yakave nesimba rakakura mukati menguva yakareba, kuunganidza hunokoka uye hwakasiyana tsika dzeveruzhinji.
Inozivikanwa nekurova kwemahombekombe egungwa, akasiyana masango emvura, nenzvimbo huru dzemadhorobha, Brazil inopa mikana yakawanda kune vanhu vanosarudza kutamira ikoko. Kufamba kwehupenyu kuri kupa simba uye kuyedza, saka iwe unozowana hupenyu hwako hucharamba huchienda nekudzoka pamwe neiyi renji. Nekudaro, chinhu chimwe chiri pasina mubvunzo - kugara muBrazil kuri kutyora uye iwe unosiya mumwe munhu akangwara, ari nani pazviri. Ndiwo mutongo wakasarudzika wekufunga kuti Rio ndiro guta guru reBrazil uye kuti ndiyo yekufungidzira kwerudzi. Chokwadi, Brasilia ndiro guta guru, uye rinokatyamadza seRio de Janeiro, ingori ratidziro yechimwe chinhu chikuru zvine chekuita nerudzi rwunofanira kuunza patafura. Kuchamhembe kweBrazil kwave kwakakanganiswa nevevanhu vemuAfrica uye izere nezvinokwezva zvakajairika; iyo yekumaodzanyemba inoratidzwa nenhaka yayo yekuEurope; uye pakati peizvi, ese ari matanda, materu, mapaki eruzhinji, nzvimbo dzine simba dzemadhorobha, zvitendero zvakasiyana, uye mimhanzi isingaverengeke.
Vanhu vazhinji vanofunga kuti vanonzwisisa zvinoita 'nzvimbo yakajairika' yeBrazil yakafanana. Mushure mekugara imomo, iwe uchaona kuti izvi zvinonyanya kuvhiringidzika uye kuti nyika yakasarudzika nedzinza. Iko kukanganisa kweEuropean, chiJapan, chizvarwa, uye Africa mubereki kwakaita musanganiswa wechokwadi wenzanga uye hunhu chaihwo, uye kutaridzika kwevanhu kwakasiyana kwazvo muBrazil. Kana iwe uchida waini tsvuku, iwe ungangove wajaira kuinwa iyo mukamuri tembiricha. Kunyange zvakadaro, munzvimbo dzinopisa dzeBrazil, zvakajairika kunwa waini tsvuku iyo yakambopihwa iwe mumudziyo wechando. Kunyangwe izvi zvingaite senge kumahombekombe kwehunyanzvi hweyakajairika chiremera chewaini, pese pawakasangana neBrazil zhizha, unonyatsouya kuzonamata uye kubvuma inotonhora waini tsvuku. Brazil yakanaka kwazvo; sangano rayo kwete chaizvo.
Zvinhu, semuenzaniso, mavhiza, kutenga chivakwa, kana kutanga bhizinesi zvinoda mirwi yebasa rekutarisira iro rinoda kusangana nemazizi ezve kutenderera. Imwe yenguva yacho, iwe uchafanirwa kudaidzira uye kuzvipira, asi iwe pasina nguva unonzwisisa kuti zvisinei nezvaunotaura, iyi ndiyo nzira inoitwa muBrazil. Zvinotemesa musoro, asi inozadza seyakanaka kurovedza muviri kuti zvinhu zvishoma zviri kunze kwesimba rako uye unongoda kuenda ne (kukanganiswa) kuyerera. Kubata nguva chinhu chisina hanya zvakanyanya muBrazil. Pane mukana wekuti iwe ugamuchire kuungana kunotanga na8 pm, vanhu vazhinji vazhinji vanozozviratidza mushure meizvozvo, uye izvi zvinoonekwa sezvakanyanya kujairika. Zvinogona kunetsa vanhu vanokurumidza uye vanokasika kutanga neizvozvo iwe unozozvijairira. Iwe mukufamba kwenguva unonzwa kunzwa kwemukana kana iwe ukarasa izvo zvisingachinjike zvenguva zvinodikanwa uye woona kuti apo neapo, kuratidza kumusoro kwenguva hakuwanzo kuda kuve kwekutanga.
VaBrazil vanhu vane rudo uye havafungi nezvekuudza mumwe munhu manzwiro avari kuita. Vazhinji vanozoongorora zviri pachena mamiriro ezvinhu pavanonzwa vakatarisisa, vakashatirwa kana kuda, chimwe chinhu vanhu vanobva munharaunda dzakasiyana uye hwaro vangave vachida kudzvinyirira. Muchiitiko chekuti muBrazil anokuda kana anokuda, iwe uchafunga nezvazvo. Vanozozvibvumidza ivo pachavo vanzwe zvavanonzwa, pane kuzvivanza. Naivowo vachatsvaga zvakanaka mune chero mamiriro ezvinhu anotyisa. Icho chiitiko chinotyisa kana hunhu uhwu huchitanga kuuya pauri. Mushure mekugara mukupisa uye nehunyoro, iwe uchaona kuti zvinonzwika sei kuva nemazuva akajeka akajeka uye inodziya mamiriro ekunze (kunze kwekunge uri kumaodzanyemba kweBrazil, uko kunotonhora kunotyisa munguva inotonhora yegore). Zvakaoma kudzokera kunzvimbo inotonhora uye ine dutu mushure mekunge iwe uchinge waziva kuti zvinonakidza sei kuva muzuva chikamu chikuru cheiyo nguva. Nzvimbo senge São Paulo dzinovakirwa pabasa nebasa, zvisinei, mune chiitiko chekuti iwe unogara kumahombekombe kumahombekombe enharaunda dzemaguta senge Rio de Janeiro kana Recife, iwe unozosvika pakuda mararamiro akagadziridzwa. Nzira yekubata nebasa kuita uye nekuriita mushe, asi kana uri mukana wakaringana wekudzokera kumba, hapana kunamatira padhuze. Zviri zvakananga kumahombekombe egungwa, kunzvimbo yepare, kunzvimbo yekutandarira kuti umhanye kana kubhawa kuti unzwisise zvakapetwa zvakapetwa nevakabatana.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeBrazil
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muBrazil
Kugara nekudyara kweBrazil
"Permanent mugari vhiza" (VIPER)
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweBrazil
Mushure memakore mana ekugara asina kumiswa muBrazil aine PR chinzvimbo.
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari vemuBrazil
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweBrazil
Real estate / Bhizinesi
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweBrazil
Kuenda kune imwe nyika kuBrazil kunogona kuita nzira yakaoma, kunze kwekunge iwe uchida kuisa mari munyika iyo 40,000 USD. Iyo Brazil Investor Chirongwa iri nyore, yakatwasuka nzira yekutamira kune iyo nyika. Chirongwa ichi chinodhura zvichienzaniswa nedzimwe nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara muBrazil kukurudzira
YeBrazil Real Estate Investment inokodzera iyo Brazilian Permanent Residency Permit yeBRL 500,000 (app. 125k EUR kana 142k USD).
Kune maviri makuru makuru ekudyara mhando dzeBrazil Investment chirongwa. Yekutanga muzvivakwa. Iko kudyara muzvivakwa kunofanirwa kuve BRL 500,000 (app. 125k EUR kana 142k USD). Mune zvimwe zviitiko zvakati wandei zvinokwanisika kuisa mari pakati peBRL 150,000 neBRL mazana mashanu ezviuru muzvikamu zvehunyanzvi, kutsvagisa kwekutanga kana chiitiko chekutsvagisa. Iyo yekudyara inogona zvakare kuitwa mune tekinoroji kana sainzi maburi. Iyo kambani inosungirwa kuratidza chirevo chinoratidza kuti iyo investimenti ichiripo mushure memakore matatu. Chinhu chekutanga chaunofanirwa kuita kugadzira kambani uye kusarudza mhando yemari yekudyara. Iyo kambani inofanirwa kukwanisa kuita uye kuunza purofiti. Izvo zvinosungirwawo kugadzira nzvimbo dzemabasa. Mushure mekunge munhu awana pekugara kuBrazil, iye / iye anogona kuve mugari mushure memakore mana. Iko kune mukana wekudzora iyo nguva.
Mari inodiwa kuBrazil
Kambani yedu inobatsira mukuwana nhamba yekuchengetedzwa kwevanhu. Mushure mezvo, isu tinonyora iwe pamwe nekudyara neBrazil central bank. Isu tichanyatso tarisa maitiro ekuchinjisa mari yako kukambani ine central bank. Mushure mekunge mari dzaendeswa, iwe unozoendesa iwe kunyorera. Ipapo, iwe unozopihwa investor vhiza yeBrazil. Iwe unozowana yako RNE "Yero Kadhi" inova iyo Permanent Residency paunoshanyira Brazil kekutanga.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweBrazil
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuBrazil uye Residency ne Investment Lawyers yeBrazil inopa vatengi uye mhuri dzavo muBrazil nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuBrazil, kugara nekudyara kubva kuBrazil uye nemimwe mikana yekudyara yekubva kune dzimwe nyika, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haana kungogumira mukugara nekudyara kubva kuBrazil kana Golden Visa kubva kuBrazil kana ugari nekudyara kubva kuBrazil kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuBrazil, ichipa mhinduro izere kana iwe uchida kutanga kambani mu Brazil kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muBrazil uye zvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari nezvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuBrazil uye sekondari pekugara.
Rutsigiro Rwakakosha kune Vagari veBrazil:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yeBrazil, kuburikidza neyedu inokwanisika mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yeBrazil, inokwanisika inivhesitimendi mari yekuenda kune dzimwe nyika vanokumbira mari kuBrazil, inokwanisika Residency nevarairidzi vezvekudyara kuBrazil, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kuBrazil uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu yeBrazil
Kugara nekudyara kubva kuBrazil kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muBrazil kune 37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuBrazil kuenda ku37 Nyika.
Pasipoti yechipiri kubva kuBrazil kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuBrazil kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuBrazil.
Goridhe visa zvirongwa muBrazil kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuBrazil kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri mapasipoti mapasipoti kubva kuBrazil kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuBrazil kuenda ku106 Nyika.
Kugara nekudyara kweBrazil kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvezvivakwa muBrazil nemaonero ekuti mutengi anofanirwa kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara muBrazil, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwakaitwa navo kweKugara kwavo nekusima kweBrazil. Tine tie-up nevashoma varidzi venzvimbo muBrazil vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muBrazil, kutora zvakanaka kudzoka.
Yakanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveBrazil nemari yekudyara muzvivakwa muBrazil.
Unoda kuziva - Brazil Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuBrazil kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Kugara nekudyara kuBrazil. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuBrazil inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utame kubva kuBrazil kana kuenda kuBrazil, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kweBrazil kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeBrazil uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuBrazil, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neResidency yako nekudyara kunyorera kuBrazil isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti.
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuBrazil. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kweBrazil uye vhiza yegoridhe inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zveResidency nekudyara kunyorera kuBrazil zvagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveBrazil.
Kana chikumbiro chako cheKugara nekudyara kweBrazil chikatenderwa, tinogovana newe nhau dzakanaka uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara muBrazil kune vari pasi apa vataurwa Vanhu kana mabhizinesi muBrazil:
Residency nebasa rekudyara kuBrazil hazvipi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovanisa zvombo uye mabara kubva kana kuBrazil.
Residency nemapurogiramu ekudyara kweBrazil hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muBrazil kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuBrazil.
Residency nekutsvaga kwekudyara kuBrazil hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muBrazil.
Residency nerutsigiro rwekudyara yeBrazil haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muBrazil.
Residency nebasa rekudyara kuBrazil haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiri kana zvombo zvenyukireya muBrazil.
Residency nechirongwa chekudyara kutsigira kweBrazil hakuwanikwe kune vanhu veBrazil vanoita mukutengesa, kuchengetedza muBrazil, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yeBrazil haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yeBrazil haisi yezvitendero uye masangano avo muBrazil.
Residency nebasa rekudyara mu Bhuraziri haina kupihwa kune vanhu vari kuita Zvinonyadzisira muBrazil.
Kugara Kwedu magweta muBrazil haitsigire bhizinesi rekutengesa muzvinodhaka muBrazil.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veBrazil neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa chero kupi zvako kubva kuzviremera muBrazil kubvumidzwa kunyorera Residency nekudyara muBrazil.
Kugara nekudyara muBrazil nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muBrazil mukudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muBrazil.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvinodiwa nemutemo zveBrazil, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuBrazil inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheBrazil.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuBrazil vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuBrazil.
Ruzivo Rwekugara nekudyara kwekukumbira kweBrazil nevamiriri vepamutemo veBrazil vachipa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veBrazil kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuBrazil uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuBrazil
Isu tine ruzivo rwepasi rese muResidency nekudyara kusanganisira neBrazil, kubatsira vatengi kubva kumativi ese epasi nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuBrazil kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu neshanu dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuBrazil
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweBrazil ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veBrazil, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kweBrazil uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yeBrazil
Maitiro Ekubvumidza Kubasa kuBrazil
Kwekugara kwenguva pfupi muBrazil
Permanent Residence muBrazil
Embassies uye ma Consulates eBrazil
Kugara neInvestment muBrazil uye Mamwe Masevhisi
Isu takanyora pasi mamwe mashoma masevhisi atinopa muBrazil nezvezvinoitika kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira pamwe nemhuri yako kuenda kuBrazil nekudyara mari, isu semumwe wako kuBrazil, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana paungangoda muBrazil nemitengo inodhura.
Kunze kweResidency nekutsvaga kwekudyara kuBrazil, isu tinopa bhizinesi, IT uye HR masevhisi zvakare muBrazil, izvo iwe zvausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nechero vamwe vanopa mazano kuBrazil ichitigadzira one-stop shop yeBrazil nenyika 106.
"Isu takaisa makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuBrazil mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kweBrazil nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye kusunga-muBrazil nepasirese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muBrazil kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muBrazil yakachipa nesu.)
Akaundi yeBhangi muBrazil
Chero ani investor anotamira kuBrazil angazoda account yako yebhangi muBrazil uye account yebhangi yekambani muBrazil, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Payment suo muBrazil
Kana iwe uchida kubvunza muBrazil, ye mhinduro dzemadhijitari muBrazil senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muBrazil kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Brazil kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga ravepo bhizinesi muBrazil kutanga pakarepo muBrazil.
HR Services muBrazil
Our kambani yevashandi muBrazil inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare post nzvimbo muBrazil vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeBrazil
Bhizinesi foni nhare dzeBrazil pamwe ne nhamba dzeBrazil Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muBrazil
Accounting, kushingairira kwakakodzera muBrazil uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muBrazil
Setup bhizinesi muBrazil
Mushure mekugara patsva nekudyara kuBrazil, setup bhizinesi mu Bhuraziri.
Isu tinopa pazasi zvakataurwa mhinduro dzeIT muBrazil
Kugadzira Webhu muBrazil
Ecommerce Kuvandudza muBrazil
Webhu kuvandudza muBrazil
Kuvandudza kweBlockchain muBrazil
App Kubudirira muBrazil
Software Kubudirira muBrazil
Magweta eResidency neInvestment muBrazil
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuBrazil uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuBrazil, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuBrazil ine vamiririri vekunze vanoendawo muBrazil, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa vatengi sevhisi yeBrazil ne kujekesa sarudzo dzekudyara mhinduro dzeBrazil vanhu pamwe nemhuri dzavo. Kugara kwedu neboka rekudyara kuBrazil kunopa mhinduro dzakagadziriswa dzekubudirira kweMutengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuBrazil, pamvumo yako yekugara muBrazil inogamuchirwa.
Simba regweta reBrazil rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevemagweta ekudyara muBrazil. Kana iwe uri muBrazil kana kuronga kushanyira Brazil, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadhare yakawedzera yekuwana Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuBrazil uri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe munharaunda yeBrazil. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weBrazil.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muBrazil
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muBrazil?
Kugara nekudyara kuBrazil, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweBrazil kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBrazil kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera kuti ugare nekudyara kuBrazil, ugaro nehurongwa hwekudyara kweBrazil. inotsigirwa nekugara nemabasa ekudyara kuBrazil, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara muBrazil, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara muBrazil uye kugara kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuBrazil, vachishanda pekugara zvakanakisa nevamiriri vezvekudyara muBrazil, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muBrazil.
Kugara nemabasa ekudyara mari kuBrazil | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muBrazil | Kugara patsva nemagweta eInvestment muBrazil | Kugara nemagweta ekudyara muBrazil | Kugara nevanoona nezvekudyara kuBrazil
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara muBrazil?
Ugari nekudyara kuBrazil, kunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweBrazil kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBrazil kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe muBrazil. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuBrazil, ugari nehurongwa hwekudyara kuBrazil inotsigirwa nehugari nehumambo hwekudyara kuBrazil, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara muBrazil, ugari hwakanakisa nemagweta ezvekudyara muBrazil uye hunhu hwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuBrazil. kuva chizvarwa chakanakisa nevamiririri vezvekudyara muBrazil, uye makambani akanakisa ekuona nezvekupinda kwevanhu munyika muBrazil
Affordable Investor immigration services kuBrazil | Vanodhura vanotamira kune dzimwe nyika vanokumbira muBrazil | Vanodhura varidzi vemari vanoenda kune dzimwe nyika muBrazil | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muBrazil | Vanodhura vatyairi vanoona nezvekupinda kune dzimwe nyika kuBrazil | Affordable immigration law firms kuBrazil
Ndeipi tsananguro yepasipoti yechipiri muBrazil?
Yechipiri pasipoti muBrazil, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weBrazil kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBrazil kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. Nyorera pasipoti yechipiri kuBrazil, yechipiri pasipoti chirongwa cheBrazil chinotsigirwa wechipiri pasipoti masevhisi kuBrazil, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti muBrazil, magweta echipiri epasipoti muBrazil uye akanakisa echipiri mapasipoti ekuBrazil, anoshanda kumahofisi echipiri epasipoti muBrazil, uye akanakisa mafemu ekuona nezvekupinda muBrazil.
Chechipiri pasipoti services kuBrazil | Chechipiri pasipoti vamiririri muBrazil | Yechipiri mapasipoti magweta muBrazil | Yechipiri mapasipoti magweta muBrazil | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuBrazil
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muBrazil?
Ndarama vhiza muBrazil, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara kuBrazil kuburikidza nekudyara muhupfumi hweBrazil kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, hurumende zvisungo, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwe. Nyorera vhiza yegoridhe kuBrazil, chirongwa chendarama vhiza yeBrazil inotsigirwa goridhe vhiza masevhisi kuBrazil, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta muBrazil, akanakisa egoridhe vhiza magweta muBrazil uye akanakisa endarama vhiza varairidzi kuBrazil, vanoshanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muBrazil, uye akanakisa ekupinda kwevanoona mafemu muBrazil.
Goridhe vhiza services yeBrazil | Ndarama vhiza vamiririri muBrazil | Magoridhe vhiza magweta muBrazil | Magoridhe vhiza magweta muBrazil | Goridhe vhiza varairidzi veBrazil
Ndechipi chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muBrazil?
Hushoma kudyara kweResidency nekudyara muBrazil ndeye USD 40,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuBrazil yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muBrazil nevamiriri muBrazil vanopa rutsigiro rweKugara nekudyara muBrazil.
Kugara nekudyara kuBrazil kune mutengo here?
Mutengo weKugara neInvestment kuBrazil uye Residency nemari yekudyara zvinodiwa kuBrazil ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete mari yekubvunza yeResidency neInvestment kuBrazil, isu tinopawo yakawanda zvimwe zvinotsigira zveKugarazve neInvestment mhinduro.
Ndeipi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuBrazil kana investor visa kuBrazil?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuBrazil kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuEurope, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuBrazil kubva kuNepal, Residency nekudyara kuBrazil kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuBrazil kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yeBrazil
Kumbira Yemahara kubvunzana kune yako Residency neInvestment kuBrazil
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeBrazil
Brazilian Association of Transport makambani Passenger Land
Nyika Yese Confederation of Viwanda
Cement Brazilian Association, Portland
Sangano reMakambani eBrazil emakambani eRuzivo Technology
Brazilian Association of Pulp uye Pepa
ABRAVIDRO - YeBrazil Association yeVagovanisi uye MaPurosesa eGirazi Panes
Ministry of Foreign Affairs: www.mre.gov.br
Brazilian Association of Chikafu Maindasitiri
Brazilian Association of the Industry Machina uye zvigadzirwa
Aromas uye Allies
Ministry of Development, Indasitiri: www.mdic.gov.br
Brazilian Association of Vagadziri uye Vanotengesa kunze kweNguruve
India-Brazil Chamber of Commerce: http://www.indiabrazilchamber.org/en/
Brazilian Association of International Kutungamira Makambani
Sangano reDzidzo muBhizinesi Administration
Brazilian Association of Distribuidoes yeMakemikari uye Petrochemicals
YeBrazil Chemical Chemical Association
National Association yekusimudzira kweVanochengetedza
Bhurawu Association yeMasangano uye Basic maindasitiri
YeBrazil Association yeZvekutenga Nzvimbo
National Sangano rePetroleum Indasitiri
YeBrazil Foundry Association
Bhuroka Association yeVagadziri Vashangu
Brazilian Association of Fine Chemical Industry, Biotechnology uye yayo Specialties
Bhurazil Association Yenyika ye Pasta Maindasitiri
Brazilian Association of Paint Vagadziri
National Association of Ceramic Tile Vagadziri coating
Packaging Brazilian Association
Brazilian Association of Chemical Injini
Brazilian Plastiki Association Association
National Association of VeMotokari Vagadziri
Brazil yeBrazil Union yeVakasimudzira Yakanaka
Mubatanidzwa wePurasitiki Mafuta Resins
Bhurawu Association yeMaficha maficha
Bhuroka Association of maindasitiri uye Nyama Exporters
National Association of Ceramic Indasitiri
YeBrazil Clothing Association
Brazilian technical Association yeGirazi Automatic Maindasitiri
YeBrazil Gorosi Viwanda Sangano
YeBrazil Association yeCeramics
Bhuroka Association of Injiniya Vanoongorora
Brazilian Association yeRifiriji, Kupisa Mhepo uye Kupisa
Association of Reffiriation maindasitiri, Heating uye Mhepo Kurapa State of Rio de Janeiro
YeBrazil Mineral Mvura Indasitiri Sangano
iyo National Union yeWire Drawing uye Kutenderera Ferrous Metals
YeBrazil Association of Maindasitiri eMafuta Akakosha, Aromatic Chemicals, Mafuta,
Bhazi reBrazil Association of International Transport Makambani Cargo Express
Brazilian Chamber of Construction Indasitiri
Bhuroka Association yeCitrus Varimi
Brazilian Association yeMagetsi Distribadors
YeBrazil Institute yeGeography &: http://www.ibge.gov.br/home/
Brazilian Association yeMagetsi neMagetsi indasitiri
Mubatanidzwa weVakuru vekuvaka muNyika yeRio de Janeiro
Syndrate yeVarume uye Varnish veSão Paulo
Ministry of Agriculture uye: www.mapa.gov.br
Brazilian Association of Concrete Services Makambani
Portal Brasil: www.inhemaco.gov.br
National Union yeZipinganidzo Indasitiri Yezvemotokari
Brazilian Association of Pipe Maindasitiri uye Metal accessories
Portal yeiyo Bhizinesi yeBrazil: http://www.portaldaindustria.com.br/cni
Brazilian Association yeMetallurgy, Zvigadzirwa uye Mining
Brazilian technical Association yePulp uye Pepa
Indasitiri Union yeSão Paulo State Kuvaka
Directory yemakambani eBrazil: www.anovamrardador.gov.br
Bhuroka Association of International Vatakuri
YeBrazil Association yePolymers
Union Rubber Artifact Industry muHurumende yeSão Paulo
Bhurawu Association yeKofi Kambani
Brazilian Hotari Indasitiri Association
Brazilian yehuku Union
Brazilian Association of Artificial uye Synthetic Fiberi Vagadziri
Bhurawu Association yeRubber Artifacts Industry
Brazil Kunze- Kutengeserana Kunze:http://www.comexbrasil.gov.br/
Bhuroka rePurasitiki Rokudhinda
Brazilian Association of Textile uye Apparel Indasitiri
Brazilian Association of Vegetable Oiri Maindasitiri
Link to Dhipatimendi Rekupinda muBrazil , Inotarisira kuumba marongero ekuchimbidza Immigration muBrazil